Kaleio: Shabakad Bulsho ee Shaqaalaha Adduunka | Martech Zone
Kaleio: Shabakad Bulsho ee Shaqaalaha Caalamiga ah
Haddii dhiirigelintaada aasaasiga ah ee internetka ay tahay inaad isku xirto oo aad la wadaagto macluumaadka xirfadleyda kale ee warshadaha, ama inaad la xiriirto macaamiisha iyo iibiyeyaasha, Facebook wuxuu si dhakhso leh u noqonayaa mid aan la maarayn karin. Inta udhaxeysa sawirada shaqsiyadeed iyo xayeysiinta, waxaa soo baxaya buuq. LinkedIn wali waa meesha lagu joogo laakiin Kaleio waxay raadineysaa kobcinta isgaarsiinta iyo iskuxirka xirfadlayaasha xoogaa ka duwan.
Barnaamijkooda waxaa loo dhigay, iyada oo aan wax qasab ah la gelin, oo la geliyo wargeys, xallinta guddiga loogu talagalay QnA, guddiga Dhacdooyinka, Goob suuq loogu talagalay dhajinta fursadaha ama suuqgeynta adigu, iyo xitaa qolka qolka - qolka farriimaha ee aad kula xiriiri karto dadka kale si gaar ah.
Kaleio aragga waa afar laab
Kordhi abuuritaanka bulsho shaqaale caalami ah. Xilligan, ma jiraan habab fudud oo isgaarsiineed oo ka dhex dhaca warshadaha adduunka, xirfadaha, iyo xirfadaha.
Fududeynta isku xirka iyo isku xirnaanta bulshada shaqaalaha adduunka. Kaleio waxay u fidisaa jawi kuwa shaqaaluhu inay dareemaan inay qayb ka yihiin shabakad ballaadhan oo dadka fahamsan shaqadooda maalinlaha ah iyo caqabadaha ganacsi.
Meel loogu talagalay wararka warshadaha gaar ah oo ballaaran, dhacdooyinka, cusbooneysiinta, iyo isbeddellada. Xubnaha waxay wali kujiraan wararka warshadaha, dhacdooyinka, cusbooneysiinta, iyo isbeddellada.
Waxay u ogolaataa kuwa ka tirsan bulshada xoogsatada inay bixiyaan, iyo sidoo kale raadinta, shaqooyinka, alaabada, adeegyada, iyo xalalka Kaleio waa gaari bixiya suuq geyn bilaash ah oo loogu talagalay ganacsiyada, oo ay ku jiraan aalad raadinta ugu fiican ee alaabada, adeegyada, xalalka, iyo fursadaha shaqo. Shakhsiyaadka ayaa sidoo kale codsan kara, ama siin kara, talobixin waxtar u leh ganacsiga maalinlaha ah, shaqsiyadeed, ama arrimaha u gaarka ah warshadaha.
Farqiga weyn ee aan ku arko Kaleio waa in aan loogu talagalin isticmaalka moobiilka sidoo kalena uusan laheyn codsi moobiil ah. Adduunyada ay xirfadlayaashu u adeegsanayaan taleefannadooda casriga ah aaladdooda isgaarsiineed ee aasaasiga ah, tani waxay u baahan tahay in la hirgeliyo haddii ay rajeynayaan inay u baxaan sidii madal!
Ku biir Kaleio lacag la’aan maanta. Waxay sidoo kale bartilmaameedsadeen xayeysiinta la iibsan karo sidoo kale.
Tags: shabakada b2bbeeshakaleionetwork bulshada
5 Faa'iidooyinka Ku Darsiga Macluumaadka Shabakaddaada